Qiimaynta Ciyaar Gacmeeda FIFA 17 Oo Lionel Messi Hoos Loogu Dhigay, Cristiano Ronlado Oo Hogaaminaya Iyo Neymar Oo Helay Qiimayn Cajiib Ah - Wargane News
Home Sports Qiimaynta Ciyaar Gacmeeda FIFA 17 Oo Lionel Messi Hoos Loogu Dhigay, Cristiano...
Qiimaynta Ciyaar Gacmeeda FIFA 17 Oo Lionel Messi Hoos Loogu Dhigay, Cristiano Ronlado Oo Hogaaminaya Iyo Neymar Oo Helay Qiimayn Cajiib Ah
EA Sports ayaa samaysay arin muran badan aduunka kubbada cagta ka abuurtay kadib markii ay hoos udhigtay qiimayntii Lionel Messi ee ciyaar gacmeeda FIFA 17, waxaana qiimaynta ugu saraysa helay Cristiano Ronaldo. Dhinaca kale Neymar JR ayaa helay qiimayn cajiib ah.
Lionel Messi ayaa ciyaar gacmeedii FIFA 16 waxa uu ku jiray halka ugu saraysa isaga oo haystay qiimaynta 94 laakiin markan waxaa hoos loogu soo celiyay 93 halka Ronlado uu u dalacay 94. Neymar JR ayaa ku jira kaalinta saddexaad wuxuuna haystaa 92. Messi ayaa min afar xidigood ku haysta lugtiisa midig iyo xirfada dhaqaaqiisa balse Neymar ayaa min shan dhibcood oo buuxda ku haysta lugtiisa bidix iyo waliba xirfadiisa dhaqaaq.
Lionel Messi ayaa sanadkan ka maqan wajiga hore ee FIFA 17 wuxuuna taas badalkeeda ku biiray Pro Evolution Soccer 2017 oo ay si wayn u xifiltamaan FIFA. Kadib markii uu Champions League iyo Euro 2016 uu ku soo guulaystay Ronaldo ayaa markale ku raaxaysanaya in uu ugu danbayn Messi kala wareegay qiimaynta ugu saraysa ee ciyaar gacmeeda FIFA. Ronlado ayaa lugtiisa bidix oo aanu inta badan isticmaalin ku helay afar xidigood halka uu shan xidigood ku haysto xirfad dhaqaaqiisa.
Dadka Indha gorgorka ah leh ayaa markii arkay qiimaynta cajiibka ah ee la siiyay Neymar JR kaas oo shan xidigood ku helay lugtiisa bidix oo aanu si joogto ah u isticmaalin wuxuuna sidoo kale shan xidigood oo qiimaynta ugu saraysa ah uu ku helay qaabka xirfad dhaqaaqiisa.